Ingabe Kuzobakhona Inkathi Yekristalu Emnyama Yokuphikisa Isizini 2? - Ukuzijabulisa
Ingabe Kuzobakhona Inkathi Yekristalu Emnyama Yokuphikisa Isizini 2?
Yenziwa Kanjani Isizini Yokuqala?
I-Dark Crystal Age of Resistance Isizini 2
Izoba Mayelana Nani I-Dark Crystal Age of Resistance Season 2?
I-Dark Crystal: I-Age of Resistance iwuchungechunge lwethelevishini olusakazwayo lwe-Netflix kanye ne-Jim Henson Company elise-United States. Kuyisiqalo sefilimu kaJim Henson yango-1982 ethi The Dark Crystal, futhi ingena endaweni ye-Thra, eyadalelwa ifilimu yoqobo. U-Rian, u-Deet, no-Brea bangama-Gelfling amathathu emzamweni wokuhlanganisa imindeni ye-Gelfling ukuze bavukele i-Skeksis ecindezelayo futhi basindise iplanethi yasekhaya i-Thra esihlahleni esibi esaziwa ngokuthi Ubumnyama. Uchungechunge lwethulwe ngendlela encomekayo ngo-Agasti 30, 2019. Uchungechunge lwamenyezelwa ukuthi luzonqanyulwa ngemva kwesizini eyodwa ngoSepthemba 2020.
Le phrojekthi ekuqaleni yayibhekwa njengelandelanisa ubude besici ku-The Dark Crystal ebizwa ngokuthi Amandla Ekristalu Emnyama, kodwa yadonsa kanzima ekuthuthukisweni kwesihlanzo iminyaka. Ngo-2012, ngemva nje kokukhululwa kwe-Clash of the Titans, umqondisi uLouis Leterrier wabonisa isithakazelo sokujoyina uJim Henson Productions kuphrojekthi yabo, enethemba lokuthakazelisa ama-studio amakhulu, kodwa wenqatshwa kaningi ngoba, ngokusho kwakhe, babenesithakazelo kuphela ku-Transformers. , futhi abaphathi abaningi babengakaze bezwe ngeThe Dark Crystal. Ngenxa yengcebo yezinto ezitholakala kumanothi kaJim Henson kanye noFrank Oz ngobusuku bangaphambi kokukhishwa kwefilimu, u-Leterrier wanquma ukuthwebula uchungechunge lwama-prequel esikhundleni sokulandelana kwesinema ngesikhathi salokhu kuvalwa.
U-Lisa Henson uyena owakubona Njengesiqalo, sebenzisa i-Wall of Destiny kusukela kufilimu yokuqala: Yayiyini lelo siko? Yini eyalahleka? Yayiyini igama laleyo mpucuko yaseGelfling ethandekayo? Ngemuva kwalokho, kwaqashwa abalandeli be-The Dark Crystal uJeff Addiss, uWill Matthews, noJavier Grillo Marxuach njengababhali. Ngemuva kokuthi u-Leterrier ethole umphathi wesitudiyo owabelana ngothando neqembu ngesithombe sokuqala, indawo yagcina ithengiswe kwabakwaNetflix.
I-Netflix inikezwe iphrojekthi njengochungechunge lwama-prequel opopayi. IPhini likaMongameli Wokuqukethwe Koqobo u-Cindy Holland uphinde wabuka ifilimu ngemuva kokuzwa ngesisekelo futhi wabuza mayelana nethemba lokudala uchungechunge bukhoma, okwamangaza kakhulu i-Henson Company. Ngo-2016, ifilimu yokuhlola emfushane ene-puppet Skeksis kanye ne-CGI Gelfling yakhululwa ukuze kubonakale ukuthi uchungechunge lungathuthuka yini kwifilimu. Ukuhlolwa kwagcina kuncenge i-Henson Company kanye ne-Netflix ukuthi umbukiso udinga abalingiswa be-puppet.
Uma ufuna omunye umthamo ukuzijabulisa ke sinawo LITTLE VOICE SEASON 2 ohlwini lwethu.
Isizini yokuqala ye-Age of Resistance yathatha iminyaka eminingana ukuyidala, kodwa ungalindeli ukuthi ulinde isikhathi eside kangaka isizini yesibili - opopayi nendawo sesenziwe, futhi iningi lomsebenzi seliqediwe. Kodwa-ke, silindele ukuthi izindawo ezengeziwe nezinhlamvu zitholakale ngesizini yesibili (okuningi kulokho kamuva), ngakho-ke kungase kudingeke silinde isikhathi eside kunohlelo olujwayelekile lwezinyanga eziyi-12 lwe-Netflix. Ngeke sibe nandaba uma kuba nokubambezeleka kwezinyanga ezimbalwa. Nakuba i-Age of Resistance ingumbukiso wezingane, isizini yokuqala igcine ‘ubumnyama’ be-The Dark Crystal, ngakho siyawuthanda umqondo wokubuka isizini yesibili ekwindla noma ebusika. Isizini yokuqala iboniswe okokuqala ngo-Agasti 2019 ngemva kokumenyezelwa ngoMeyi 2017. Isikhathi esiphakathi kwesizini yokuqala neyesibili kufanele sibe izinyanga eziyi-14. Izokhishwa ngasekupheleni kuka-2020 ekuqaleni (uma kubhekwa isimo somhlaba).
Umhlaba weThra uyashabalala, njengoba sifunda ochungechungeni lokuqala. I-Skeksis enonya iye yafaka ushevu ku-Crystal of Truth, futhi isifo besilokhu sibhebhetheka. Ngemva kokutholwa u-Gelfling abathathu beqiniso elithusayo elilandela amandla e-Skeksis, kulandela ukuzijabulisa njengoba kubaswa amalangabi okuvukela futhi kuqala impi enkulu yomhlaba. Noma okungenani, yilokho okwashiwo ama-synopsis ngaphambi kokuba umbukiso usakazwe - umbukiso wawuyinkimbinkimbi kakhulu, uhamba, futhi wesabeka kunaleyo ncazelo eyisisekelo ephakanyisiwe. Isizini yesibili kulindeleke ukuthi iqhubeke nokuxhaphaza kuka-Rian, Brea, kanye no-Deet, neqembu le-Henson elithuthukisa umhlaba we-Thra futhi lilethe abalingisi abasha empini ye-Gelfling-Skeksis.
I-Gelflings ingabalingisi abakhulu ochungechungeni lwe-The Dark Crystal. Angama-humanoid aluhlaza anezici zobuso ezinde ezake zagcwala iningi le-Thra, isandla ngasinye sineminwe emithathu emide nesithupha.
UJen ungowesilisa osemusha uGelfling ongumlingiswa wefilimu, okhuliswe yi-urRu Master urSu kusukela esemncane ngesikhathi umndeni wakhe ubulawa amaGarthim. Wayenenhloso futhi engenasineke ngenxa yokukhuliswa kwakhe yi-lax urRu. UJen ugqoke ijazi elinombala okhilimu.
UKira wagcina ezulazula emphakathini wasePodling futhi wamukelwa ngemuva kokweqa ekubulaweni kwabantu bakubo ngesikhathi efihlwe umama wakhe esiqwini sesihlahla esingenalutho. UKira wafundiswa ukuxhumana nezilwane zasendle ngabakwaPodlings futhi uthanda ukuhamba ezindaweni ezingamaxhaphozi ngaphesheya kwedolobha lasePodling neFizzgig. Ngokuvamile ukhulumela phansi futhi unozwelo.
I-Vapra Clan iwumndeni wakwaGelfling ohlala e-Ha'rar, idolobha elisezintabeni eziphakeme ezineqhwa elivela kwethi The Dark Crystal: Age of Resistance, futhi osekunesikhathi libusa phezu kwezinye izizwe zamaGelfling. I-Vapra Clan iyingcweti yokufihla futhi ingahlangana kunoma iyiphi indawo.
I-Stonewood clan umndeni wakwaGelfling ohlala endaweni ehlala i-Dark Wood yase-Stone-in-the-Wood futhi ivela ku-The Dark Crystal: Age of Resistance. Banamandla futhi bayaziqhenya, futhi iningi labo lisebenza njengama-Crystal Guards eCrystal Castle. Amalungu e-Stonewood Clan nawo angabasebenzi bezinwele abanekhono kanye nabalimi.
Abalingisi befilimu yango-1982 yamaphupho ehlelo I-Dark Crystal uchungechunge badalwe umdlozi u-Jim Henson kanye nomdwebi womqondo u-Brian Froud, ngolwazi oluningi olumayelana nezinhlamvu ezithile namagama ezinhlobo zezilwane oluvela ezintweni ezengeziwe ezifana nencwadi kaFroud ethi The World of the Dark Crystal. Izincwadi, amahlaya, umsebenzi wobuciko, imidlalo, kanye ne-The Dark Crystal: Age of Resistance, uchungechunge lwama-prequel lwango-2019, konke kukhishwe njengengxenye ye-franchise.
I-Marvel's Wolverine - Konke Esikwaziyo Kuze kube manje
Ububi obungachazeki esigodlweni: Idokhumentari ngeMpi Engajwayelekile